မိုက်ကယ် Platini ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ပင်မစာမျက်နှာ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲအထက်တန်းလွှာ မိုက်ကယ် Platini ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
LB "အကောင်းဆုံးအမည်ပြောင်အားဖြင့်လူသိများသူတစ်ဦးဘောလုံးပြိုင်ပွဲ Elite ရဲ့အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက်ဘုရင်"။ ကျွန်ုပ်တို့၏မိုက်ကယ် Platini ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့သူ့ရဲ့ကလေးဘဝအချိန်ကနေယနေ့အထိသည်သင်မှတ်သားလောက်ဖြစ်ရပ်များတစ်ဦးအပြည့်အဝအကောင့်တတ်၏။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကျော်ကြားမှု, မိသားစုနောက်ခံ, ဆက်ဆံရေးဟာအသက်, သူ့ကိုအကြောင်းကို (နည်းနည်းလူသိများ) များစွာသောအခြား OFF-အသံအချက်အလက်များရှေ့တော်၌မိမိဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိပါဝငျသညျ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Micheal Platini ပုံပြင်ကျော်ကြားမှုမှရှင်းလင်းခြင်းကနေသူ့မြင့်တက်တစ်ခရီးအဖြစ်သူနှစ်ကျူးလွန်နေတဲ့တိုးတက်မှု၏ဝမ်းနည်းဖွယ်အဆုံးပေါ်တွင်သင်ကြာအခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်လိုက်ဖို့ဖြစ်တယ်။ အခုဆိုရင်နောက်ထပ် ado ခြင်းမရှိဘဲ, ရဲ့ Begin ကြကုန်အံ့။
မိုက်ကယ် Platini ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ဘ0အစပိုင်း
မိုက်ကယ်François Platini Joeuf, ပြင်သစ်မှာဇွန်လ 21 ၏ 1955st နေ့၌ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ သူကသူ့မွေးအချိန်တွင်ဆရာနှင့်အပျော်တမ်းဘောလုံးနည်းပြသူသည်မိမိအဘ, Aldo Platini မှမွေးဖွားခဲ့သည်။ အခြားတစ်ဖက်မိုက်ကယ်၏မိခင်တွင်, အန္န Platini အားကစားဘားအဖြစ်ဘာသာထားတဲ့ဘား des Sportifs မှာဖျော်ယမကာစပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့မိဘများ၏လူလတ်တန်းစားမိသားစုနောက်ခံမိုက်ကယ်များအတွက်နှိမ့်ချအစအဦးအကြံပြုထားသည်။
တစ်ဦးလူလတ်တန်းစားမိသားစုငယ်ရွယ်မိုက်ကယ်တက်ကြီးထွားလာ - သူ့အချိန်အများစုကိုလေးတွေနဲ့တူ - မိမိအဘ၏အနှစ်သက်ဆုံးအားကစားထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအပြီးလုယူဘောလုံးနှင့်နျပငျပနျးဒီဂရီမှလမ်းပေါ်ဘောလုံးကစားခွင့်ရခဲ့သည်။
မိုက်ကယ် Platini ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -အားနည်းနှလုံးသံသယ
မည်သို့ပင်ဆိုစေ, မိုက်ကယ်ကိုသူ့အဘို့စတော့ရှယ်ယာထဲမှာရှိခဲ့နှင့်အားကစားမှသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးကျူးလွန်သောအရာကိုဘောလုံးအကြောင်းကိုအပြုသဘောဖြစ်ခဲ့သည်။ လမ်းပေါ်ဘောလုံးအတွေ့အကြုံ၏စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာနှစ်ပေါင်းရရှိမှုပြီးနောက်မိုက်ကယ် FC အသင်း Metz မှာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများအတွက်ရှသတ်မှတ်ထားပေမယ့်မှားယွင်းတစ်ဦးရှိခြင်း၏သံသယအပေါ်ဘောလုံးကစားရန်သူ့ကိုအရမ်းအားလျော့စဉ်းစားသောကလပ်အားဖြင့်ပယ်ချခံခဲ့ရ အားနည်းနှလုံး.
ငယ်ရွယ်ပြီးရည်မှန်းချက်ကြီး, မိုက်ကယ်အခွင့်အလမ်းသည်သူ၏လက်ချောင်းများမှတဆင့်ချော်ပါစေမညျ့သူတစ်စုံတစ်ဦးမဟုတ်ခဲ့ပေ။ သူဟာကလပ်အားဖြင့်သူ့ငြင်းပယ်ခံရဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်နှင့်မကစား၏လယ်ပြင်ပေါ်ပေမယ့် FC အသင်း Metz အားဖြင့်စေ့စပ်တစ်အတိုင်ပင်ခံဆရာဝန်များက operated စက်သို့လေကြောင်းမှုတ်ခြင်းဖြင့်မိမိအလုံသက်သေပြမယ့်အခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏။
ဝေးအခွင့်အလမ်းကိုလိုလိုလားလားပေးမပေး, မိုက်ကယ်စမ်းသပ်မှုသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးထက်ပို ပေး. မိနစ်စုံတွဲတစ်တွဲအကြာတွင်မိန်းမောတွေဝေတစ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတဆရာဝန်ငြင်းပယ်ခံရသည်မိမိစွပ်စွဲချက်အားလျော့ခြင်းနှင့်မျှတမှုတစ်ခုကတိသစ္စာပြုအဖြစ်ကိုယူ။
မိုက်ကယ် Platini ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -အလုပ်ရှာဖွေရေး Buildup
Downtrodden, ချိုးဖဲ့ပေမယ် unbowed, မိုက်ကယ်သူ၏အသက်တာ၏အပိုငျးပိုငျးကောက်ယူမိမိပိုငျးအခွားကို၎င်းငျးနှလုံးအဖြစ်လက်ခံခံရယုံကြည်မှုခဲ့တဲ့ကလပ်မှာအခြားရိုက်ချက်အခြားငြင်းပယ်ခံရမခံမရပ်နိုင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးအပ်ပေးတော်မူ၏။
သည်အခြားကလပ်အသင်းထက်ပိုမိုအာမခံချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်ဟာ နန်စီ AS သူ၏ဖခင်ကလပ်ရဲ့ဘောလုံးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ဘယ်မှာ?.
အမှုအရာနောက်ပိုင်းတွင်ထွက်လှည့်မယ်လို့သကဲ့သို့, Metz ကလပ်ဆရာဝန်များ၏အမှားကိုအဆုတ်ရောဂါမိုက်ကယ်သူ့ကိုထင်ရှားတဲ့ကစားသမားဒါမှမဟုတ်ကလပ်အမှတ်ပေးဖြစ်လာမြင်ဘူးသောအထင်ကြီးဖျော်ဖြေပွဲတက်ထားရှိရာနန်စီ Lorraine AS ၏ကလပ်ရဲ့အိမ်နီးချင်းများနှင့်ပြိုင်ဘက်များ၏ကောင်းသောကံကြမ္မာဖြစ်လာခဲ့သည်။
မိုက်ကယ် Platini ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -Fame ရန်ထလော့
ဒါဟာမိုက်ကယ်ကိုက်ညီ 98 လိဂ်အတွက် 181 ရည်မှန်းချက်များသွင်းယူ, အထင်ကြီးသွားတာနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်-ကန်ကျွမ်းကျင်မှုအဖြစ်တိကျမှန်ကန်ပြီးစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးကြောင်းနန်စီ AS မှာခဲ့ပါတယ်။ အသက် 21 နှစ်ပေါင်းမှာ Mitchell ကတခြားအမျိုးသားအသင်းများကိုအထူးသဖြင့်ခကျြသညျမိမိကျည်ဆံအခမဲ့-ကန်ဘောကနေခံစားခဲ့ရရှိရာပြင်သစ်သည်မိမိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်စေတော်မူ၏။
(စိန့် Etienne မှာအောင်မြင်သောစာလုံးပေါင်းပြီးနောက်) ဂျူဗင်တပ်စ်မှာကစားသမားအဖြစ်မိုက်ကယ်တစ်ဦးပြစ်ဒဏ်သွင်းယူနှင့်သူ၏ဘက်ဥရောပဖလားရုတ်သိမ်းပေးရန်မြင်ဘူးသောလီဗာပူးလ်အသင်းဆန့်ကျင်ရည်မှန်းချက်အနိုင်ရသောအခါအ Fame ၏လှိုင်းတံပိုးအဝတ်လျှော်ရောက်လာတယ်။ ကြွင်းသောအရာ, သူတို့ပြောသကဲ့သို့ယခုသမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
မိုက်ကယ် Platini ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -relationship ဘဝ
သာရှိပါတယ်မိုက်ကယ် Platini ရဲ့ရင်ခုန်စရာဇာတ်လမ်းထဲမှာအမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်သူနဲ့သူ့ဇနီး Christelle Bigoni ဖြစ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။
သူကသူ့ဇနီး Christelle, ဂေဟစနစ်သိပ္ပံပညာ၏တစ်ဦးထို့နောက်ကျောင်းသားတွေ့သောအခါမိုက်ကယ်နေဆဲ AS နန်စီအဘို့ကစားခဲ့သည်။ သူမလည်းမတ်ေတာရှိတဲ့အားကစားနှင့်ကွာသည်သူ၏အမျိုးမျိုးသော tracksuit အတွက်သူမ၏ခင်ပွန်းနှင့်အတူဖော်ထုတ်ရာမှရှက်ဘယ်တော့မှခဲ့သည်။
အဆိုပါစုံတွဲသည် 1977 အတွက်လက်ထပ်ပြီးအစဉ်အမြဲကတည်းကလက်ထပ်ကျန်ရစ်ခဲ့ကြသည်။
သူတို့ရဲ့ပြည်ထောင်စုနှစ်ခုကလေးတွေ, Laurent Platini နှင့်အဏ္ဏဝါ Platini နှင့်အတူကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်။
မိုက်ကယ် Platini ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -Heysel အားကစားကွင်းဘေးဥပဒ်ကို
အဆိုပါ Heysel အားကစားကွင်းဘေးဥပဒ်ကိုအဆုံးစွန်သောနောက်ပိုင်းမှာပြိုကျသောမြို့ရိုးပေါ်မှာဖိမြင်ဘူးသောလီဗာပူးလ်နှင့်ဂျူဗင်တပ်စ်ပရိသတ်တွေအကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါကြေကွဲဖွယ်ဖြစ်ရပ်မေလ 29 ၏ 1985th အပေါ်ဖြစ်ပျက်, 39 လူတွေကို-အများအားဖြင့်အီတလီနှင့်ဂျူဗင်တပ်စ်၏အသေခံခြင်းမှဦးဆောင် fans- ကအနည်းဆုံး 600 အခြားသူတွေဒဏ်ရာရရှိနေစဉ်။
မိုက်ကယ် Platini တစ်ဦးပြစ်ဒဏ်သွင်းယူနှင့်ဥရောပခွက်ကို clinch မှလီဗာပူးလ်အသင်းဆန့်ကျင်ရည်မှန်းချက်အနိုင်ရသောထိုနေ့ခြင်းနှင့်နေရာပေါ်ဖြစ်ပျက်သောထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုတခု uneventful နေ့၌မှတ်တမ်းတင်ထားသောအသက်တာ၏ဆုံးရှုံးမှုနေသော်လည်းမိမိအကအနိုင်ဂိုးရည်မှန်းချက်ကျင်းပဘို့အာရုံမခံစားနိုင်သောအဖြစ်မိုက်ကယ် Platini စဉ်းစားများစွာကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။
မိုက်ကယ် Platini ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -post-Professional ကဘောလုံးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု
သူကဇွန်လ 32 အတွက် 1987 အသက်သောအခါမိုက်ကယ် Platini ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးကနေအနားယူခဲ့သည်။ လများအနားယူအပြီး, သူ 1988 အတွက်ပြင်သစ်အမျိုးသားခြမ်း၏မန်နေဂျာအဖြစ်နည်းပြအလုပ်တက်ခူးနှင့်သူ၏အဖွဲ့သည် 1992 ဥရောပချန်ပီယံရှစ်များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီအဖြစ်အားလုံး၎င်း၏ရှစ်အုပ်စုတစ်စုပွဲအနိုင်ရများ၏အထင်ကြီးစံချိန်ကိုမြင်တော်မူ၏။
1988 အကြား 2006 မိုက်ကယ်မှသူ 2006 အတွက်ဆန့်ကျင်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းနှင့်ယူအီးအက်ဖ်အေသမ္မတ၏စျေးကောင်းရာထူး Lennart Johansson လုပ်ကြံသည်အထိကွဲပြားခြားနားသောကော်မတီများအောက်မှာအမှုဆောင်, ယူအီးအက်ဖ်အေနှင့်ဖီဖာယန္တရားဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
Platini ရဲ့သမ္မတသက်တမ်း, 8 ရက်, 255 နှစ်ပေါင်းသည်သူ၏နောင်တော်, Lennart Johansson ၏ 16 နှစ်ပေါင်းသက်တမ်းတစ်ဦးချွန်ထက်ဆနျ့ကငျြဘခဲ့သည့်ကြာချိန်ကြာခဲ့သည်။ အဘယ်အရာကိုပြင်သစ်ပညာတတ်ဖြတ်အတိုယူအီးအက်ဖ်အေ၏ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်သူ၏အချိန်ရာ၌ခန့်ထားပြီနိုငျဘဲ, ရည်မှန်းချက်သို့မဟုတ်လိုအပ်ချက် ?.
မိုက်ကယ် Platini ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -စွပ်စွဲကျင့်ပျက်ပါဝင်ပတ်သက်မှု
Platini 2015 အတွက်နုတ်ထွက်ခဲ့သူထို့နောက်ဖီဖာဥက္ကဌ Sepp Blatter အစားထိုးအကြိုက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်, သို့သော်နှစ်လုံးကို (Platini နှင့် Blatter) ဖီဖာကျင့်ဝတ်ကော်မတီကနှင့်အတူစွပ်စွဲချက်အကျင့်ပျက်ခြစားမှု, မှားယွင်းမှု, အကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခ, မှားယွင်းသောစာရင်းကိုင်နှင့် noncooperation ၏ပြစ်မှုထင်ရှားခဲ့သည်။
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းနှင့်တန်ဖိုးကြီးအနေအထားအနိုင်ရသူကို Gianni Infantino အဘို့အလမ်းပေးခြင်း, Platini သမ္မတရွေးကောက်ပွဲဆန္ဒ (သူအကြာတွင် 8 နှစ်သို့လျှော့ချခဲ့သည့်ဘောလုံးမှ6နှစ်ပိတ်ပင်မှုပေးအပ်ခံခဲ့ရသည်ကဲ့သို့) အဆုံးသတ်ထား၏။ ဒါဟာအစမှောက်ဘောလုံးကွင်းမှသူ၏ခြောက်နှစ်ပိတ်ပင်မှုပျက်ကွက်ပြီးနောက်ယူအီးအက်ဖ်အေသမ္မတအဖြစ်သူ၏နုတ်ထွက်စေခဲ့သည်။
မိုက်ကယ် Platini ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -အခွားသောအချက်အလက်
1976 ၏နွေရာသီအတွက်ဂျူဗင်တပ်စ်မှ Platini ရဲ့အပြောင်းအရွေ့အချိန်တစ်စာချုပ်ဒါပေမယ့်ပြင်သစ်စည်းမျဉ်းနှုန်းအဖြစ်အမည်ခံအခကြေးငွေအပေါ်အခြေမခံခဲ့သည်။
သူကနိုင်ငံတကာပွဲစဉ်များတွင်နှစ်နိုင်ငံအဘို့ပေါ်ထွန်းတစ်ရှားပါး feat အောင်မြင်။ (ပြင်သစ်နှင့်ကူဝိတ်)
သူဟာကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးရွှေဘောလုံး d'Or တစ်သုံးခုအချိန်ဆုရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအနှစ်များတွင်ဖြစ်ပျက်; 1983, 1984 နှင့် 1985 ။
သူဟာခဲ့ Zinedine ဇီဒန်း ငယ်စဉ်ကလေးဘဝရုပ်တုကို။
တစ်ဦးဘောလုံးစီမံခန့်ခွဲသူအဖြစ်သူ၏အချိန်အတောအတွင်းသူသည်ကလေးကူးသန်းရောင်းတရားမဝင်တဲ့ပုံစံအဖြစ်စဉ်းစားထားတဲ့အောက်မှာ-18 ကစားသမားများ၏ပြောင်းရွှေ့ကြေး, ဆန့်ကျင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
သမ္မာကျမ်းအမှန်တရားစစ်ဆေးပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုက်ကယ် Platini ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိဖြစ်ရပ်မှန်ဖတ်နေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ LifeBogger မှာကျနော်တို့တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုများအတွက်ကြိုးစားကြသည်။ သင်ဤဆောင်းပါး၌တရားကိုကြည့်ရှုတော်မမူကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုကြည့်ရှုပါလျှင်, သင့်မှတ်ချက်ကိုနေရာသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် !.
ရှိတ် Mansour ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Lorenzo Sanz Childhoood Story Plus မဂ္ဂဇင်းဆိုင်ရာအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
အလက်ဇန္ဒား Ceferin ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Malcolm ဂလေဇာကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်